Forex Trading ၏ Tools များ | FXCC
ပင်မစာမျက်နှာ / ထရေးဒင်း / Forex Tools များ
အလုပ်လုပ်ဖို့ကိုလက်မှာညာဘက် tools တွေကိုဖူး
FXCC မှာကျနော်တို့ကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများတစ်အသုံးဝင်သောနှင့်ကျယ်ပြန့် compendium compile လုပ်ဖို့အကြီးအရှည်သွားပြီပါတယ်။ ကျနော်တို့ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်တိုင်ပင်ပါတယ်; ပြင်ပမှ, အိမျတျော၌နှင့်ပိုပြီးအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးအပါဆုံးကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူ - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များ, စျေးကွက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များ '' လက်နက်တိုက်မှ add ပါလိမ့်မယ်သောဤပြည့်စုံစာရင်းပေးနိုင်ရန်အတွက်။
ဤသည်အရေးပါသောအပညာရေးအရင်းအမြစ်များစွာကိုရှည်လျားရပ်တည်မှု element တွေကို client များအချို့သစ်ကိုဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအပြင်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဆံ့မည်ဖြစ်သည်။ အများကြီးအတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များ၏အဓိကလိုအပ်ချက်; စီးပွားရေးပြက္ခဒိန်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ထို့အပြင်နှင့်အတူပေါင်းစပ်လျက်ရှိ၏ ထူးခြားတဲ့ FX ကုန်သည် Widgets တွေ။ ရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်များကိုအတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များပေးနိုင်ရန်အတွက်သို့သော်ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောပြက္ခဒိန်ကို အသုံးပြု. ကြောင့်ကျနော်တို့သို့ ဝင်. င့်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသေးစိတ်အဆင့်ဖော်ပြသည်။
ကျနော်တို့အဲဒီကိရိယာကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များဟာသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ထို့ကြောင့်တစ်ဦးထက်ပိုအောင်မြင်တဲ့ကုန်သွယ်အတွေ့အကြုံကိုခံစားရန်အဘို့အခွင့်အလမ်းဖွင့်ပူဇော်ပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကို tool ကိုထူးခြားသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုကယ်နှုတ်တိကျတဲ့ features တွေရှိသည်ဖို့ရှေးခယျြခဲ့သညျ။
ပွဲတစ်ပွဲအရေးကြီးဆုံးကုန်သွယ် tool ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ကုန်သည်များသူတို့ရဲ့ Desktop ပေါ်မှာထားသငျ့, ဒါမှမဟုတ်အပြီးတိုင်မိမိတို့၏ကွန်ပြူတာပေါ်တွင်အခြား tab ကိုဖွင့်လှစ်ပါပြီ။ အဆိုပါ FXCC စီးပွားရေးပြက္ခဒိန်ယခုကုန်သည်များ '' အတိအကျပုဂ္ဂိုလ်ရေးဦးစားပေး fit လိုက်. နိုင်ပါသည်။
FX ကုန်သည်များ၏အမြောက်အများနေရာယူထားကြသည်ဘယ်မှာသိမှတ်ကြလော့တစ်ဦးငွေကြေးကို pair တစုံရဲ့လမျးညှနျမြားနှငျ့ ပတျသကျ. ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဖြစ်သက်သေပြနိုင်ပါတယ်။
သမိုင်းဆိုင်ရာစုပေါင်းအချက်အလက်များ၏နှစ်ပေါင်းအပေါ်အခြေခံပြီးဤသည်စိတ်ဓါတ်များညွှန်ပြချက်, တကမ္ဘာလုံးကုန်သည်များ '' စိတ်ဓါတ်များသို့ကုန်သည်များပြတင်းပေါက်ခွင့်ပြုပါတယ်။
စျေးကွက်နာရီကိုမကြာခဏပြောင်းလဲနေနှင့်အတူ, ဥပမာ, ဗြိတိသျှနွေရာသီအချိန်၏အကျိုးဆက်အဖြစ်, ကကုန်သည်များထိုကဲ့သို့သောနယူးယောက်အဖြစ်အတိအကျကြိမ်စျေးကွက်, ပွင့်လင်းဖို့တပ်လှန့်နေပါကြောင်းမရှိမဖြစ်ပါပဲ။
ဗဟိုဘဏ်ကအခြေစိုက်စခန်းနှုန်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်များထုတ်ဝေနေကြသည်အဖြစ်ကုန်သည်များအထူးသကဲ့သို့သောအဓိကငွေကြေးတာဝန်ရှိသည်ဗဟိုဘဏ်တွေကနေတကမ္ဘာလုံးခြေရင်းနှုန်းထားများသတိထားဖြစ်သင့်သည်, အမေရိကန်ဒေါ်လာ, ပေါင်, EUR, ယန်းငွေ။
FX စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှစ်ခုကွဲပြားပုံစံများကိုလာ; နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ကုန်သည်ကြီးများကပိုအသိပေးထားသောကုန်သွယ်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်နိုင်ရန်အတွက်, နှစ်ဦးစလုံးစည်းကမ်းများကိုပေါင်းစပ် employ နိုင်ပါတယ်
သတင်းဖြစ်ရပ်များနှင့်အချက်အလက်ထုတ်၏ထိပ်ပေါ်မှာ Keeping အောင်မြင်သောကုန်သွယ်၏အရေးပါသောလက္ခဏာပင်ဖြစ်သည်။ သို့သျောလညျးကိုချိုးဖောက်သတင်းများ, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အမြင်ကိုလည်းစျေးကွက်ခေါင်းနှစ်လုံးရှိရာသို့တစ်ဦးမရှိမဖြစ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးသည်။
အပြောင်းအလဲနဲ့မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြောင့်သို့အမိန့်ကိုက်ညီသော, အ ECN သည်အီလက်ထရောနစ် configured ကွန်ယက်ကိုကနေကိုးကားအစစ်အမှန်အချိန်အတွက်စောငျ့ရှောကျ။ interbank FX လှုပ်ရှားမှု၏ရလဒ်အဖြစ်စုစည်းန်ဒီရေကူးကန်ငွေဖြစ်လွယ်, FXCC ရဲ့ client များ 24 /5စစ်မှန်တဲ့, အကောင်းဆုံးစျေးကွက်နှုန်းထားမရရှိနိုင်ပါကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ဖြစ်ကြောင်းသေချာ။
ဂဏန်းတွက်စက်၏ကျွန်ုပ်တို့၏အကွာအဝေးတစ်ခုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော "အဆင်သင့်သဘောရှိ၏" ဝန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်။ သငျသညျဖို့လိုအပျပါလျှင်: အနေအထားအရွယ်အစားတွက်ချက်သင်သည်လိုအပ်သည့်အနားသတ် recalibrate တစ်ဦးသင့်လျော်သောအများကြီးအရွယ်အစားထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်, ထို့နောက်ဂဏန်းတွက်စက်၏ဤအကွာအဝေးအထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။